Haran-dranomasina no atahorana Reef Resilience
Ny vatoharan-dranomasina maneran-tany dia miatrika loza mampidi-doza manimba ny fiainany ary efa nahatonga ny faharavana sy ny fandravana tany amin'ny toerana maro. Ny hetsika fitantanana vaovao dia tena ilaina tokoa mba hiantohana ny fisian'ny soavaly mbola misy ary ny fiorenana sy ny asany izay nahatonga azy ireo ho marimaritra iraisana. Soa ihany, ireo mpahay siansa, mpiaro ny tontolo iainana, ary mpitantana ny tontolo iainana manerana an'izao tontolo izao dia mamolavola sy manatanteraka tetikady vaovao hiarovana sy hitahirizana ireo tontolo voajanahary manohitra ny fandrahonana ataon'ny mponina maneran-tany.
Ankoatra ny fahatakarana sy ny fifandraisana amin'ny zava-dehibe ny haran-dranomasina, zava-dehibe ihany koa ny mahatakatra ny fiantraikan'ny vatohara.
Ireto ambany ireto ny fanalahidy hita avy amin'ny 2011 Harena an-tsokosoko tatitra ref izay nandinika ny loza ateraky ny vatohara manerantany maneran-tany ary miteraka loza mety hiteraka fahasimbana amin'ny ho avy.
Toeram-piarovana an-dranomasina manerantany
Ny manodidina ny 75% amin'ny haran-dranomasina eran-tany dia atahorana ny fifangaroana an-toerana ary maneran- stressors.
Ny vatoharan-dranomasina dia miaina ny mari-pahaizana mihoatra ny ranomasina sy ny asidida toy ny teo aloha tany amin'ny taona farany 400,000.
Mihoatra ny 60% amin'ny haran-dranomasina maneran-tany no mivantana mivantana ny iray na maromaro ao an-toerana.
Fisamborana (izany hoe fanjono mahery vaika sy fanimbana) dia heverina fa ny loza mitatao tsy misy toetr'andro mahakasika ny haran-dranomasina manan-danja, ary manan-kery mihoatra ny 55% amin'ny vatohara rehetra eran-tany.
Amin'ny 2050, saika ny vatoharan-dranomasina rehetra dia hiantehitra noho ny fandraisan'anjaran'ireo mpitarika manerantany sy eo an-toerana.
Raha tsy misy ny fihetsika natao hanamaivanana ny fitaintainana eo an-toerana, ny ampahaton'ny harin-dranon'ny haran-dranomasina eran-tany dia hitsangana amin'ny 90% amin'ny 2030 ary akaikin'ny 100% amin'ny 2050.
Fandrahonana any amin'ny Faritra Coral Reef samihafa
Avo-na 95% amin'ny haran-dranomasina any Azia Atsimoatsinanana no atahorana.
Indonezia no faritra lehibe indrindra amin'ny haran-dranomasina atahorana, satria ny fandrahonan'ny mpanjono no fototry ny haran-dranomasina.
Mihoatra ny 75% amin'ny haran-dranomasina any Atlantika no atahorana. Any amin'ireo firenena sy faritanin'i 20 XNUMX eto amin'ity faritra ity, ny vatoharan-dranomasina rehetra dia voamarina fa norahonana.
Mihoatra ny 65% amin'ny haran-dranomasina any amin'ny Oseana Indianina sy ny Afovoany Atsinanana dia iharan'ny adin-tsaina noho ny fandrahonana an-toerana.
Manodidina ny 50% amin'ny haran-dranomasina any Pasifika no atahorana.
Manodidina ny 14% ny haran-dranomasina any Aostralia dia atahorana, na dia sokajiana ho faritra ambany indrindra amin'ny vatohara aza izy io.
Ity sarintany ity dia mampiseho ny fananganana ny haran-dranomasina manerantany noho ny loza mitatao amin'izao fotoana izao avy amin'ny hetsika ataon'ny olombelona eo an-toerana, araka ny voalazan'ny Reefs at Risk izay mampiditra ny endriky ny loza mitatao ao an-toerana. Ny endriny dia ahitana ny fanjono sy fanodikodinam-piadiana, ny fampiroboroboana amoron-dranomasina, ny loto mifototra amin'ny fandatsaham-bato, ny fandotoana an-dranomasina sy ny fahasimbana. Ny fiakaran'ny hafanana sy ny ranomasimbe dia tsy tafiditra ao anatin'ny tontolo maneran-tany, fa tsy ny fandrahonana any an-toerana. Kitiho raha hanitarana. © WRI (World Resources Institute)
Mampitombo ny tebiteby amin'ny vatohara
Ny isan-jaton'ny haran-dranomasina dia nitombo tamin'ny 30% tao anatin'ny taona 10.
Ny fitomboan'ny trangan-javatra dia mitranga manerana ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao.
Fisamborana (fanjonoana mahatsiravina sy manimba) dia nitombo tamin'ny 80% nandritra ireo taona 10 farany, ka mahatonga azy io ho ny atidoha tsy mitombina indrindra amin'ny fahasalamana manoloana ny haran-dranomasina manerantany.
Ny fanorenan'ny vatohara dia mihatra amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao.
Voamarina fa mandritra ny taona maro ao amin'ny 2050, ny 95% amin'ny haran-dranomasina dia hahatsapa ny fiakaran'ny hafanana sy ny hery anaty bleaching.
Noho ny ranomaso, dia nomanin'ny 2050 ny momba ny 15% amin'ny haran-dranomasina ho any amin'ny faritra izay ahafahan'ny aragonite ho ampy amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina.
Ny firenena sy faritra 27 dia fantatra fa tena malemy loatra amin'ny fahapotehan'ny haran-dranomasina manerana ny faritra atsimon'ny renirano; Ny 19 amin'ireo dia ireo nosy kely.
Zava-dehibe ny mampifandray ny satan'ny haran-dranomasina eny an-toerana. Matetika dia sarotra ny mahita izany na ny fidirana ity fampahalalana ity. Ho an'ny fampahalalana momba ny zon'ny firenena momba ny fandrahonana ho an'ny vatohara dia azonao atao ny miditra ao Web Safari Atreho mba hitadiavana ny tatitra izay ahitana ny antsipirihany amin'ny antsipiriany maneran-tany, faritra ary toeram-ponenana.
Ny vatohara mety atahorana ho tratran'ny fandrahonana any an-toerana amin'ny faritra. Image © WRI (Ivotoerana Loharanon-karena Iraisam-pirenena)